Sawirro iyo Video: Beesha Sheekhaal oo ka carrootay go'aankii MUUNGAAB - Caasimada Online
Home Warar Sawirro iyo Video: Beesha Sheekhaal oo ka carrootay go’aankii MUUNGAAB
Sawirro iyo Video: Beesha Sheekhaal oo ka carrootay go’aankii MUUNGAAB
Jaaliyadda Dalka Sweden gaar ahaan STOCKHOLM ee ka soo jeeda Degmada Kaxda ayaa ku eedeeysay Gudmiyaha Gobalka Banaadir,Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), in uu ka biyo diidsanyahay in aay Degmada Kaxda tahay Degmo Buuxdo oo ka Tirsan Gobalka Banaadir.
“Waxaa iskacad in uu Muungaab kala jeclaaday maamulada Degmooyinka Gobolka Banaadir oo uu Qayb qabiil ku taageeray iyo Degmada Kaxda oo uu qabiil uga soo hor jeestay” ayay tiri beesha oo kullan ku yeelatay Stockholm.
Kulankaas ayaa baaq laga soo saaaray, baaqaas oo u qornaa sidan hoos ku xusan:-
1.Beesha reer Fiqi Cumar “Sheekhaal” waxey aad ugu xuntahay in uu Muungaab ka hor istaagay ka qeyb galka gudoomiyaha degmada kaxda kulan ay lahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir.
2. Waxay beeshu cod dheer iyo mid gaaban ku cadeynaysaa in aysan u dulqaadan karin qaladaadka intaas la eg ee aan geedna loogu soo gaban.
3. Waxay beesha Sheekhaaleed baaq u diraysaa dawladda dhexe ee Soomaaliya, baaqaas oo ah in ay arinkaas sida ugu dhaqsaha badan ku soo fara galiso waxna ugu qabato gaar ahaan madaxweynaha oo ah shaqsigii u soo magacaabay muungaab xilkan.
4. Waxay beeshu baaq u diraysaa maamulka gobolka Banaadir oo ay degmada Kaxdu hoos timaado gobol ahaan in uu cudur daar ka bixiyo xad gudubka iyo gefka loo geystay degmada kaxda iyo maamulkeeda.
5. In uu Muungaab kaga dhabeeyo balanqaadkii uu qaaday markii xilka loo doortay oo ahaa in uu ka shaqeyn doono cadaalada , hormar, iyo nabad kuwada noolaashaha gobolka banaadir.
6. In dadka Soomaaliyeed ka daashay colaad iyo qabiil si xun loo isticmaalo, awooda oo si xun loo isticmaalana ay keeni karto dhibootooyin , muungaab iyo maamulkiisa taas qy maskaxda galiyaan.
7. Beesha waxa kale oo ay baaq u diraysaa dhamaan dadyawga ka soo jeeda degmada Kaxda in ay ka dhiidhiyaan arintan xun ee uu la yimid Muungaab.
8. Waxay ku baaqayaan jaaliyadda beel weynta Sheekhaal ee dalka sweden midnimada iyo isku xirnaanta beesha meelkaste ay aduunka dacaladeeda ka joogaan iyo in hal dhinac looga soo jeesto arintan uu la soo shir tagay Muungaab.
9. Waxaaan ugu baaqaynaa buslshada ka soo jeedo degmada kaxda in ay maal gashadaan degmdooda, sidoo kale ay u huraan dhiig ,maskax iyo maal intaba.
Sidoo kale beshu waxay shalay kulan arintaas ku saabsan ku yeelatay magalada Londonm
Halka ka daawo video-ga